Famongorana any Caucaia do Alto - Ny volana martsa
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Manimba any Caucaia do Alto
Manimba any Caucaia do Alto
31 / 08 / 2019 20 / 08 / 2019 ny Antonio Gancedo
Nandeha ho an'ny Kolontsaina fandriampahalemana any Cotia i 2ª, mandray ny fanohanan'ny 2ª World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy tsy fanarahan-dalàna.
Tamin'ny alahady 18 / 09 / 2019, olona avy any amin'ny tanànan'i Cotia sy ny kaominina manodidina no nanatrika ny fandaharana ny andiany 2ª amin'ny Walk for Culture of Peace, izay natao ny alahady 18, any Cotia. Ny hetsika dia natrehan'ny World March for Peace and Nonviolence, hetsika kolontsaina, foko, finoana ary malaza.
Ny Walk dia tanterahin'ny Filankevitry ny tanànan'i Cotia, amin'ny alàlan'ny ministeran'ny fanatanjahantena, kolontsaina ary fialamboly, ary avy amin'ny Vaomiera momba ny fandriam-pahalemana, avy amin'ny Departemantan'ny Kolontsaina ary ny solontenan'ny fiarahamonim-pirenena: Casa de Airá - Tradition et Culture; Gira-Sol Institute; Olê Orixá Obá Ayrá House; Tempolin'ny sidina Lazaro de Aruanda sy ny hafatr'i Silo - Kianjan'i Estudos e Reflexão Caucaia.
Ity hetsika ity dia fankalazana ny hetsika ara-kolontsaina ataontsika ...
Ny diabe, ny loko manerantany amin'ny Fandriampahalemana, ny fotsy, dia natanjaka ary ny rivo-piainan'ny fraternity dia nijery ireo mpandray anjara. “Ity hetsika ity dia fankalazana ny Hetsika Fandriampahalemana Fandriampahalemana, fanoherana sy fiarovana ny zon'ny olona, ​​ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-pivavahana. Betsaka ny fotokevitra sy firehan-kevitra maro no mitazona tanana manohitra ny fitsarana an-tendrony, ny herisetra ary ny tsy fandeferana.
Samy hafa isika, samy hafa ny fisainantsika, misy tantara samy hafa isika, manana ny fivavahanay samihafa isika, nefa mitovy ny zontsika. Manome izany fifanakalozan-kevitra amin'ny fiaraha-monina izany ny Vaomiera, fifanakalozan-dresaka ho an'ny fandriampahalemana amin'ny alalan'ny fandriampahalemana, "hoy ny Vaomiera. Ho an'ny sekreteran'ny fanatanjahantena, kolontsaina ary fialam-boly, Givaldo, "Ny Walk for a Culture of Peace" dia ny fanetsiketsehana lehibe indrindra amin'ny hetsika iray izay atao mandritra ny taona, izay mitarika fivoriana sy adihevitra maro miaraka amin'ny mponina. "
Raha ny nambaran'i Gilmar de Almeida, Sekreteran'ny kolontsaina ao an-tanàna, dia mandeha ny hetsika
Araka ny filazan'i Gilmar de Almeida, Sekretera momba ny kolontsaina ao an-tanàna, manomboka izao ny hetsika ary, manomboka izao, i Cotia dia hihetsika amin'ny fahatsapana ny fizarana ny lalan'ny Kolontsaina fandriampahalemana. “Ny hetsika iray manan-danja toy izany dia tsy voafetra ho an'i Cotia. Hiezaka isika hanitatra izany, hampiditra ny faritra, satria ny tolona ho an'ny fandriampahalemana dia tsy misy sisintany, ”hoy izy.
Amin'izany toe-javatra izany, ny 2 World martsa ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana izay "hazakazaka" manomboka amin'ny 02 / 10 / 2019 ka 08 / 03 / 2020, mamangy an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'i Cotia manodidina ny 12 / 12 / 19, dia mihevitra fa tena ilaina ny manohana sy mandray anjara amin'ny hetsika eto an-toerana tahaka ity iray izay atao any an-tanànan'i Cotia.
Ny Hafatr'i Silo, iray amin'ireo mpanolotsaina hatramin'ny andiany farany amin'ny dia, dia tonga tamin'ity dia ity; Ho fanampin'ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana ny fandaminana, i Silo dia nampiely ny lanjan'ny fandriampahalemana sy ny tsy fandeferana amin'ny alàlan'ny fivoriany sy ny fombafomba manamora ny fanatanterahana ny lohahevitra. Nisy koa ny Fianaran'i Caucaia sy Valan-jaza Fandinihana, amin'ny alàlan'ny olona samihafa nampiharina tamin'ny famotorana sy fampiroboroboana ny fandriampahalemana sy ny tsy fanoloran-tena.
5 / 5	(Review 1)
Bolivia dia manao sonia ny fankatoavan'ny TPAN
Ampaherezo ny martsa manerantany 2!
Taratasy fanokafana ho an'ny TPAN
+ Fandriampahalemana + Tsy misy herisetra - fitaovam-piadiana niokleary